DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA TP-LINK TL-WN821N - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Iji rụọ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla ejikọrọ na kọmputa, ịchọrọ ngwanrọ pụrụ iche - onye ọkwọ ụgbọala, yabụ ị ga-achọpụta otu esi arụnye ya maka nkwụnye Wi-Fi TL-WN821N.
TP-Link TL-WN821N nhọrọ nrụnye ngwanrọ
E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee ka nkwụnye Wi-Fi gị zuru ezu. Ọ dị mkpa ịghọta ihe niile iji mee ka ị nwee nhọrọ.
Ihe mbụ ị ga-eme mgbe ị na-eche mkpa iji wụnye software bụ ịga na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke onye nrụpụta ngwaọrụ. Ọ bụ ebe ahụ ị nwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala nke dị mma maka kọmputa ahụ ma bụrụ 100% dabara maka ngwaọrụ ahụ.
Ya mere, gaa na ebe nrụọrụ weebụ ukara nke TP-Link.
Na isi mmalite nke saịtị ahụ anyị na-ahụ ihe ahụ "Nkwado", pịa ma gaa n'ihu.
N'etiti etiti na-emepe, enwere windo maka itinye ụdị ihe ntanetị Wi-Fi. Anyị na-ede "TL-WN821N" na ebe nyocha ma pịa akara ngosi ya na iko di ebube.
Ebe nrụọrụ ahụ na-enye anyị peeji nke abụọ maka ihe nkwụnye Wi-Fi, anyị na-agbanye na nke na-adaba na ihe nlereanya nke ngwaọrụ ahụ site na ịpị foto ahụ.
Mgbe ntughari ahụ gasịrị, anyị kwesịrị pịa bọtịnụ ọzọ. "Nkwado", ma ọ bụghị na nke dị na nkụnye eji isi mee nke saịtị, kama na nkeonwe.
Otu ihe dị mkpa ịmepụta TP-Link TL-WN821N Wi-Fi nkwụsị bụ nhọrọ nke mbipute ya. N'oge ahụ, e nwere atọ n'ime ha. Nọmba mbipụta ahụ dị n'akụkụ ihu nke igbe ahụ.
Mgbe nke ahụ gasịrị, a na-agafere anyị ọzọ na ibe ọhụrụ, ebe ịchọrọ ịchọta akara ngosi ahụ "Ọkwọ ụgbọala" ma mee otu mkpụrụ na ya.
N'ọkpụkpọ ikpeazụ nke ọkwọ ụgbọala ahụ, anyị ga-enyerịrị aha ọkwọ ụgbọala na nbudata ahụ ga-amalite. Isi ihe bụ ịhọrọ usoro ọrụ arụmọrụ. Ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere Windows 7 ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, 8, mgbe ahụ ọ kachasị mma ịhọrọ ọkwọ ụgbọala ebe ha jikọtara. Iji budata pịa aha onye ọkwọ ụgbọala ahụ.
Ebe nchekwa nchekwa, nke nwere ọkwọ ụgbọala. Maka ịga n'ihu na-arụ ọrụ, mepee ya ma gbanye faịlụ ahụ na ndọtị .exe.
Mgbe nke a gasịrị, ọkachamara nwụnye na-emepe n'ihu anyị. Nke mbụ bụ windo ịnabata. Push "Na-esote".
Ihe niile ga-adị mfe. Nhazi ọkachamara amalite usoro nchọpụta na kọmputa nke eriri Wi-Fi ejikọrọ.
Ntinye anaghị ewe oge dị ukwuu, ọ na-amalitekwa ngwa ngwa mgbe nchọpụta nke ngwaọrụ ahụ.
N'ụzọ dị otú a site na nbudata site na saịtị ọrụ gọọmentị nwere ike weere dị ka atụle. Mana ọ bụ naanị otu n'ime ọtụtụ, ya mere anyị na-enye ndụmọdụ ka ị mara onwe gị na onye ọ bụla.
Ịnwekwara ike ịhazi ihe nkwụnye Wi-Fi site na iji njirimara pụrụ iche.
Iji chọpụta ya, ọ dị mkpa ịlaghachi na usoro mbụ ma mee ihe niile site na mmalite, ma naanị ruo nzọụkwụ 7, ebe anyị na-ahọrọghị "Ọkwọ ụgbọala"ma "Ezigbo Uru".
Ọkwọ ụgbọala a kwesịrị ekwesị maka Windows 7, yana maka mbipute ya 10. Ya mere, ọ kachasị mma ibudata ya.
Nbudata nke ebe nchekwa ahụ malitere, ebe anyị nwere ike ịchọta faịlụ ahụ na nchịkọta .exe. Gbaa ya ma soro ntuziaka nke Wizard Wụnye.
Mgbe ịchọtachara ngwaọrụ ahụ, ntinye nke ngwanrọ dị mkpa ga-ebido, mana ị ga-ebu ụzọ họrọ ihe ị chọrọ ibudata. Ọ bụrụ naanị na ị chọrọ ọkwọ ụgbọala, họrọ "Wụnye naanị ọkwọ ụgbọ ala" ma pịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
A bit nke na-echere na niile software dị mkpa ga-arụnyere na kọmputa.
E nwekwara ngwa pụrụ iche nke kwesịrị ekwesị maka ngwaọrụ ọ bụla ma nwee ike ịchọta ngwanrọ ha chọrọ na nkeji ma wụnye ya na kọmputa ha. Ọ bụrụ na ị nụbeghị ihe ọ bụla gbasara ngwá ọrụ ndị dị otú ahụ maọbụ na ị maghị onye kachasị mma, mgbe ahụ, anyị nwere ike ikwu na ị gụọ isiokwu na weebụsaịtị anyị.
Usoro mmemme ọkacha mmasị bụ DriverPack Solution. Nke a abụghịkwa n'ihi na onye ọ bụla nwere ike ibudata ya na saịtị onye mmepụta ọrụ n'efu. Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta nnukwu nchekwa data nke ndị ọkwọ ụgbọala, nke a na-emelite mgbe niile. Ọ bụrụ na enwere mmasị ịmatakwu banyere ngwanro ahụ ma ghọta otú e si eji ya, mgbe ahụ anyị na-atụ aro ka anyị gụọ akwụkwọ anyị, bụ nke a na-akọwa nuances nile nke arụ ọrụ na ngwanrọ dị otú a n'ụzọ dị mfe ma dị mfe.
Usoro 4: Ntọala Ngwaọrụ Pụrụ Iche
Ngwaọrụ ọ bụla nwere ọnụ ọgụgụ pụrụ iche nke ya. Site na ọnụ ọgụgụ a, ị nwere ike ịchọta onye ọkwọ ụgbọala ngwa ngwa ma wụnye ya na kọmputa gị. Na nkwụnye Wi-Fi TP-Link TL-WN821N, ọ dị ka nke a:
Ọ bụrụ na ị maghị ịchọta TP-Link TL-WN821N ọkwọ ụgbọala Wi-Fi site na ID, mgbe ahụ, ọ kachasị mma ịmatakwu ihe onwunwe anyị.
Windows operating system nwere ọrụ ntanetị nwere ike imelite ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala. Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-ele ohere a anya ghara ịdị irè. Ma, ọ ka mma iji gbalịa ịnweta nhọrọ niile ọ bụla karịa ịnọgide na-enweghị ihe ọ ga-eme na ịghara ịnwale.
Na saịtị anyị, ị ga-ahụ nkọwa zuru ezu banyere otú ọrụ dị otú ahụ si arụ ọrụ, ebe ịchọta ya na otu esi edozi nsogbu ahụ na ndị ọkwọ ụgbọala.
N'ihi ya, anyị na-eleba anya dịka ụzọ 5 iji wụnye ọkwọ ụgbọala maka eriri TP-Link TL-WN821N Wi-Fi. Maka isiokwu a ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa ma budata ngwanrọ.